Resaky ny mpitsangantsangana ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mba nifaly ny tany sy zavaboary iny herinandro iny. Faly ny olombelona, indrindra ny tantsaha. Velom-bolo ny ahitra fa maitso mavana. Nirotsaka ny andon’ny lanitra, ary nanome ny tsirony ny tany. Nisesisesy manko ny orana tato ho ato. Manararaotra manetsa ny tantsaha na dia efa tara aza. Sitrany ahay e ! Ny miasa, manatsatoka sy mikolokolo no antsika olombelona fa tsy nisy afaka nametraka ny voa hotoazana ampitso amin’ny taho iray. Raha mianjera ny paoma sy ny manga azo hazavaina ara-pizika noho ny herin’ny tany misintona ny mavesatra eo aminy, fa tsy nisy nanazava ny fiakaran’ny paoma sy ny manga teo amin’ny taho iray, sy ny fotoana nitomboany tsikelikely ary ny fivoarany miandalana.
Tsy ny toetr’andro ihany no niova fa anisan’ny miova koa ny resaka COVID. Nitombo ny tahan’ny olona mitondra tsimokaretina. Mitombo ny ahiahy sy ny fampitandremana ny fihanaky ny aretina. Ny sekoly no zary sehatra itomboany tao ho ao. Ao ireo nakatona ; ao ireo mandray fepetra samhafa. Efa dingana faharoa ve ? Sa ilay endriny vaovao no efa tonga eto ? Be ny ahiahy ! Be ny fanontaniana ! Ny fiaraha-miaina amin’ny aretina no ezahina hizarana.
Teo amin’ny sehatry ny politika dia nafana ny hetsiky ny mpanohitra niara-nitsangantsangana. Nampanaonao foana ny teo amin’ny fitondrana mihitsy aza. « Ataovy resaky ny mpitsangantsangana an ! Tsy misy kabary politika ! » Navoaka ny toby ireo miaramila sy zandary ary polisy fa toa hisy hanakorontana foana. Feno ny kihon-dalana. Nirohotra tokoa ny olona namonjy an’Imerinkasinina. Nanakantsakana tokoa ny eo amin’ny fitondrana mba tsy hahatanteraka ny hetsika. Nofeperana ny onjam-peo hampitao vaovao. Nasaina niverina ny fiara sasany. Nilana vaniny hoy ny tompon’andraikitra. Vao mainka nanokatra ny olana ara-tsosialy ateraky ny politika iny fepetra tsy manjary, noraisin’ny fanjakana iny. Mahatsapa ny vahoaka fa misy zavatra tsy manjary amin’ny fitantanana ny firenena.
Tsy manjary satria, anaty lalànan’ny firenena, lazaina fa malalaka ny olona hivezivezy eto amin’ny tanin’ny repoblika, saingy misy ampahan’olona voafepetra.
Tsy tokony ho ahiahiana ny olona amin’ny fanehoan-keviny sy ny finoany na ny firehana politikany. Fa eto amintsika ny mpanohitra dia raisina ho mpanakorontana lava. Te hanaja ny zon’olombelona ny fanjakana repoblikanina demokratika, nefa ny lalàna heveriny no demokrasia ho azy, na manosihosy ny lalàna sy ny zon’olombelona aza. Mora ny mirona amin’ny tsy refesi-mandidy rehefa fahefana no mibaiko ny fanapahan-kevitra politika.
Fa mbola mitohy koa ny resaka raharaha volamena 73,5 kg. Mitohy mihamivoatra maneho tsikelikely ny marina ezahina totofana. Mety maneho koa ny lainga marivo tototra. Ny lainga manko toy ny salaka, ka ny tompony ihany no afatony. Dia miara-mivoatra eny an-kianja ny marina sy ny lainga. Saingy ny marina toy ny volamena latsaka am-bovoka, tsy avelan’ny hasoany tsy hamiratra. Ireny fifanoheran’ny vaovao samihafa ireny, ireny resa-be mifanohitra etsy sy eroa ireny, dia sady mifona lainga no mibitsika ny marina. « Ny manao lainga marivo tototra manko, hoezin’ny akoho tokan’anaka » ary « na dia mitavozavoza aza ny marina, mbola habaribariny ireo lainga tsara lahatra rehetra ».
Ny aina no matezà, hifanantitra amin’ny ambanilatra e !